Home News Dooni Ganacsi oo Ku Gubaneysa Meel u Dhaw Dekada Magaalada Boosaaso
Dooni Ganacsi oo Ku Gubaneysa Meel u Dhaw Dekada Magaalada Boosaaso
Sidda ay shegayan wararka anu ka heleyno Magaalada Boosaaso aya shegaya in Dooni ganacsi oo taaganeyd meel u dhow Dekedda Boosaaso qabsaday dab iyado an ku so xiran dekeda.
Doonta ayaa taagneyd meel dhanka Bari kaga beegan Badwaynta , waxaana dabku uu ka kacay Gudaha doonta.
Doonida ayaa waxa ay siday shidaal iyo Gadiid waxaana ay ka timid dalka Imaaraadka Carabta.
Doontan saaka uu dabku ka kacay ayaa lagu magacaabaa Nuur Saabir, waxayna ay u rarnayd Ganacsato reer Puntland ah.
Doontaan ayaa muddo dhan Afar maalmood taagneyd halkaasi, waxaana ay sugeysay in ay kusoo xirato Dekedda Boosaaso.